Metonymy Vs Synecdoche - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on April 22, 2013 at 12:31 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အလင်္ကာများနဲ့ပတ်သက်လို့ “စကားတန်ဆာအလင်္ကာ” ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာအတန်အသင့် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ နောက် irony နဲ့ litotes တွေအကြောင်း “အထေ့အသောဝေ့၀ိုက်ပြော” မှာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်စာထပ် ရေးခဲ့ပြီး အခုတော့ metonymy နဲ့ synecdoche တို့အကြောင်း တင်ပြပါဦးမယ်။ အင်္ဂလိပ်စာပေဟာ ဂရိ၊ ရောမ၊ လက်တင် စာပေလင်္ကာတွေရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြီးစွာခံခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ၄င်းတို့ရဲ့ရှေးခေတ်က စကားတန်ဆာဆင်ခြင်း နည်းနာတို့ဟာလည်း အင်္ဂလိပ်စာပေအနုပညာမှာခိုင်မြဲစွာနေရာယူ ထားခဲ့ကြပါတယ်။ အလင်္ကာ (literary devices, figure of speeches) တွေအလွန်များပြားလှတဲ့အတွက် အကုန်လုံးတစ်ထိုင်တည်း တစ်ပုဒ်တည်းမတင်ပြနိုင်ဘဲ အသုံးများသည်တို့ကိုသာ အလျဉ်းသင့်သလို ရေးသားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Metonymy ကို Webster's New World College Dictionary ကဒီလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။
a figure of speech in which the name of one thing is used in place of that of another associated with or suggested by it (Ex.: “the White House” for “the President”)
ဂရိဘာသာစကား metōnymia အခြားအမည်< meta, other(အခြား)change(ပြောင်းသည်) + onoma, onyma, (အမည်) name> ဆိုသည့်စကားကဆင်းသက်လာသည်ဟုဆိုပါတယ်။
အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏အမည်ရင်းကိုမသုံးဘဲ ၄င်းနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသော အခြားအရာဝတ္ထု တစ်ခုအမည်နှင့်အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာရှင်ဘုရင်တစ်ပါးအား ဖော်ညွှန်းရာတွင် “ရာဇပလ္လင်ဖင်မြဲအောင်” ဟုသုံးစွဲသည်ဆိုပါဆို့။ ပလ္လင်ဆိုသည့်အရာမှာ ရှင်ဘုရင်သာထိုင်ခွင့်ရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ရေမြေ့သနင်းပြည့်ရှင်မင်းတို့၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။ မင်းအာဏာနှင့်ပလ္လင်သည်တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေသဖြင့် မင်းအာဏာအစား ပလ္လင်ဟူသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုသုံးစွဲခြင်းသည် metonymy ဟူသည့်အလင်္ကာဖြင့်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။
We await word from the crown.
အင်္ဂလိပ်စကားတွင် crown ကိုထီးနန်းအာဏာ အနေဖြင့်သုံးသည်။ red-letter day ဟုဆိုလျှင် အရေးကြီးသောနေ့/အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက် ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၏ပြက္ခဒိန်တွင် ပွဲတော်နေ့ရက် များကို အနီရောင်ဖြင့်ပြထားလေ့ရှိသည်။
ဓါးသွားထက်ကလောင်သွားထက်၏။ ကလောင် သည် စာရေးဆရာတစ်ဦး၏ အတွေး အခေါ်မှ ပေါ်ထွက်လာသည့် စကားလုံးများပုံဖော်သည့်ကရိယာဖြစ်သည်။ ဓါးသည် စစ်မက်ရေးရာ၊ တိုက်မှုခိုက်မှုတွင်သုံးသည့်ကရိယာဖြစ်သည်။ လက်နက်အင်အား ဖြင့် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက် ခြင်းထက် စာပေရေးသားတိုက်ခိုက်ခြင်းကပိုထက်မြက်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
the white house = US president's office
oval office = US president's office
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရသည့်အဆင့်အများကြီးထဲက မြင်သာသည့်တစ်ခုကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ထိုအလုပ်ကိုတိုက်ရိုက်မဖော်ပြဘဲ metonymy အနေဖြင့်သုံးလေ့ရှိသည်။ let' go to bed now ဟုပြောခြင်းသည် အိပ်စက်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက် အိပ်စက်အနားယူလိုပါက (၁) အိပ်ယာသို့သွားရမည်။ (၂) အိပ်ယာပေါ်တွင်လှဲလျောင်းရမည်။ (၃) အိပ်ပျော်အောင် မျက်စေ့မှိတ်အနားယူရမည်။ ထိုအဆင့်ဆင့်အား “အိပ်ယာဝင်သည်” ဟု တစ်ခွန်းတည်းပြောခြင်းသည် metonymy ဖြစ်သည်။ metonymy အား ကြော်ငြာများတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုကြသည်။
Metonymy ကို synecdoche နှင့်မကြာခဏမှားတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ synecdoche အား metonymy ပုံစံတစ်မျိုးဟုဆိုကြသည်။ သူတို့နှစ်ခု၏အဓိကကွာခြားချက်မှာ metonymy သည် ကိုယ်ရည်ညွှန်းသည့်အရာဝတ္ထုနှင့်တစ်စုံတစ်ရာဆက်စပ်ပတ်သက်နေသော်လည်း ၄င်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်။
Synecdoche ကိုatype of trope ဟုဆိုကြသည်။ ဥပစာစကား။ တင်စားသောအသုံးအနှုန်း ဟုဆိုလျှင်ရမည်ထင်သည်။စာဖတ်ပရိတ်သတ်၏အမြင်အာရုံတွင်ပို၍ကြွလာစေရန်ရုပ်လုံးဖော်ပေးသည်။
A figure of speech in whichapart is used to represent the whole.
အစိတ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကို တစ်ခုလုံးအားရည်ညွှန်းရန်သုံးသည့်အလင်္ကာဟုဆိုသည်။ share information ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် ဂရိဘာသာစကား မှဆင်းသက်လာသည်။
All hands on deck. လူစုံအသင့်။ သင်္ဘောသားအသုံးဖြစ်သည်။ လက်သည် ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရာတွင် လက်ကိုအသုံးပြုရသည့်အတွက် ကုန်းပတ်ပေါ်တွင် လှေသားအားလုံးစုရုံးရောက်ရှိနေပြီ။ အလုပ်လုပ်ရန်အသင့်ဖြစ်ပြီဟု ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်သည်။
တစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းရန် ၄င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို သုံးခြင်း
စကားလုံးတစ်လုံး/စကားစုတစ်ခု တကယ်ရည်ညွှန်းသည့် အဓိပ္ပါယ်ထက် လျော့နည်း၍ဖြစ်စေ၊ ပို၍ဖြစ်စေ သုံးခြင်း
သေးငယ်သည့်အတန်းအစား/အုပ်စု ကိုဖော်ပြရန် ပို၍ကျယ်ပြန့်သော/ကြီးသော အတန်းအစား/အုပ်စုကို သုံးစွဲဖြင်း
Part to Represent Whole
အင်္ဂလိပ်စကားတွင် အရာဝတ္ထုတစ်ခုလုံးအားရည်ညွှန်းရန်အတွက် ၄င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအား သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။ ကလေးငယ်တစ်ဦးအား “သား ABCD ရပြီလား”ဟုမေးခြင်းသည့် A-Z အက္ခရာများအားလုံးရပြီလားဟုမေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်တို့၏အစားအစာတွင် ပေါင်မုန့်သည်အဓိကဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အစားအစာ/ငွေကြေး ကိုရည်ညွှန်းသောအခါ ပေါင်မုန့်ဖြင့်တင်စားတတ်သည်။
ပေါင်မုန့် -- > အစားအစာ
ငွေကြေး --> အစားအစာ
ပေါင်မုန့် --> ငွေကြေး
He is the breadwinner.
ဂီတဟာကျွန်တော့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်တယ်။ (အဓိကငွေဝင်ရာလမ်းဖြစ်တယ်)
ရွက်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် sail ကို သင်္ဘောတစ်ခုလုံးအားပြောရန်လည်းသုံးလေ့ရှိသည်။
hired hands သည် ”လူငှား” ။ အလုပ်သမား
ကျွဲနွားများအားရေတွက်ရာတွင် head ဖြင့် တစ်ကောင်၊ နှစ်ကောင်ဟု ရေတွက်သည်။
wheel သည် မော်တော်ယာဉ်ကိုဆိုလိုသည်။
Coke သည် တံဆိပ်အမျိုးအစားများစွာသော အချိုရည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် coke သည် ထင်ရှားလွန်းအားကြီးသဖြင့် အချိုရည်ဟူသောကုန်ပစ္စည်းအားလုံးမှန်သမျှ coke ဟုထင်မှတ်လာစေရာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် carbonated beverage အားလုံးအား coke ဟုပင် သုံးစွဲကြတော့သည်။
Whole to RepresentaPart
England Football team won the World Cup in 1966 ဟုဆိုမည့်အစား England won the World Cup in 1966. ဟုအင်္ဂလန်ကိုယ်စားပြုအသင်းသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သဖြင့် အင်္ဂလန်ဟုသုံးစွဲပုံမျိုးဖြစ်သည်။
မြန်မာစကားတွင် “လောကကြီးကမကောင်းပါဘူး”ပြောခြင်းသည် တစ်လောကလုံးမကောင်းဟုပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိမိနှင့်ပတ်သက်ဖူးသည့်လူတစ်ချို့က မကောင်းဟုပြောခြင်းမှန်းသိသာသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားတွင်လည်း “The world is not treating me well.” ဟုပြောလေ့ရှိသည်။ police ဟုဆိုလျှင် ရဲသားတစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကိုသော်လည်းကောင်း ပြောနိုင်သည်။ pentagon ဟုဆိုလျှင် အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ရည်ရွယ်သည်။
Class as Representing the Whole
သေးငယ်သည့်အတန်းအစား/အုပ်စု ကိုဖော်ပြရန် ပို၍ကျယ်ပြန့်သော/ကြီးသော အတန်းအစား/အုပ်စုကို သုံးစွဲတတ်သည်။ အမေရိက ဟုဆိုလျှင် United States of America ကိုဆိုလိုမှန်းလူတိုင်းသိသည်။ သို့ရာတွင် အမေရိက သည် တောင်အမေရိက၊ မြောက်အမေရိကရှိနိုင်ငံပေါင်းများစွာတည်ရှိသည့် အုပ်စု class ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြန်မာစကားတွင်တော့ နွားနို့၊ ဆိတ်နို့ ဟုခွဲပြောလေ့ရှိသော်လည်း အင်္ဂလိပ်စကားတွင် milk သည် နို့ရည်ဟူသည့်အတန်းအစားထဲမှ နွားနို့ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။
အရာဝတ္ထုတစ်ခုအားပြုလုပ်သည့်ပစ္စည်းကိုအစွဲပြု၍ ထိုအရာဝတ္ထုများအားလုံးခေါ်ဝေါ်အသုံးပြုသည်။ ရှေးခေတ်က silverware သည်ငွေထည်အစစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုအဓိကဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အသုံးများခေတ်များတွင် လင်ပန်း၊ ခရား၊ ပန်းကန် စသည့် ပြောင်ပြောင်လက်လက်ရှိသည့် အသုံးအဆောင်များကိုလည်း silver ဟုခေါ်ကြသည်။ plastic ဟုဆိုလျှင် အကြွေးဝယ်ကတ်ပြား credit card များကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်စန္ဒယားခလုတ်များအား ဆင်စွယ်ဖြင့် မပြုလုပ်တော့သော်ငြားလည်း ivories ဟုပင်ဆက်လက်သုံးစွဲနေကြသည်။ ကျည်ဆန်ထိပ်ဖူးအားခဲဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်။ ထိပ်ဖူးသည်ကျည်ဆန်တစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းသာဖြစ်သော်လည်း lead ဆိုလျှင် ကျည်ဆံကိုသာဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။
Container Representing its Contents
ကုန်ပစ္စည်းထည့်သည့်ခွက်ကိုလည်း ၄င်းထည့်သည့်ပစ္စည်းအလားသုံးစွဲကြသေးသည်။ တစ်စည် barrel ဆိုလျှင် ဘီယာ သို့မဟုတ်၊ ရေနံ တစ်စည်ဖြစ်သည်။
စာပေအနုပညာဟူသည်မှာ စာရေးဆရာတစ်ဦး၏ တွေးခေါ်ခံစားမှုတို့မှ စကားလုံးများ အဖြစ်စီးဖြာထွက်လာရာ ၄င်းစကားလုံးများသီကုံးဖွဲ့နွဲ့ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်အလိုက် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် သန်ရာသန်ရာ ရေးဖွဲ့ကြသည်။ ထိုသို့အဆင်အသွေးအမျိုးမျိုးရှိသော စကားလုံးများကို ထိထိမိမိခံစားနားလည်နိုင်ဖို့ဆိုလျှင် အလင်္ကာသုံးနှုန်းပုံ၊ ဘာကြောင့်ထိုသို့သုံးခြင်းများကို သဘောပေါက်ထားသင့်သည်ဟုဆိုလျှင် လွန့်အံ့မထင်ပါ။
Permalink Reply by Thar Htoo Zaw on April 23, 2013 at 11:11
ဗဟုသုတ တိုးပွားခဲ့ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ